Home Wararka Abiy Axmed oo diiday in uu is casilo iyo TPLF oo...
[Xaaladdii ugu danbeysay Itoobiya] Abiy Axmed oo diiday in uu is casilo iyo TPLF oo ku soo dhawaaneysa Adis Ababa
Wada-hadaladdii maraykanku hor kacaayay ee la doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda dagaal ee ka taagan dalka Ethiopia ayaa fashilmay.
Wafdi uu hogaaminaayay danjiraha gaarka ah dawladda maraykanka ee mandaqadda Geeska Afrika Ambassador Jeffrey Feltman oo khamiistii yimid magaalada Addis Ababa lana kulmay Ra’isal wasaare Abiy Axmed ayaa dhammaan dedaaladiisii noqdeen hal bacaad lagu lisay, ka dib markii Abiy uu diiday qorshe maraykanku doonaayay inuu Abiy Axmed is casilo, si looga bad-baadiyo magaalada Addis Ababa in dagaal lagu hoobta ka dhaco.
Dedaalo kale oo ay wadeen madax ka tirsan dalalka Bariga Africa ayaa iyaguna guul daraystay, waxaana hadda keliya hadhay in xoogaga TDF iyo OLA oo is bahaysanaya ay xoog ku soo gallaan maalmaha soo socda magaalada Addis Ababa oo ay u jiraan ilaa 200 km.
Dhinaca kalana ciidamo tiradoodu ka badan tahay ilaa shan kun oo askari oo asalkoodu ka soo jeeda Oromo, oo ka tirsana ciidamada militaryga ayaa shallay ku biiray jabhadda OLA, taasi oo amakaag ku riday taliyayaasha ciidanka militeryga Ethiopia, ciidamada goostay ayaa dhawaan la keenay duleedka koonfureed ee magaaladda Addis Ababa looguna tallo gallay inay magaalada Addis Ababa ka difaacan isla jabhada OLA ee ay ku biireen.
Gudaha magaalo madaxda dalka Ethiopia ee Addis ayaa wallow ay noloshu si caadi ah u socoto, waxaa haddana jira xiisad kacsan oo magaalada ka taagan, xukuumadda ayaa qoryaha fudud u qaybinaysa dadka asalkoodu Amxaarada ah ee ku nool magaalada Addis Ababa si ay magaalada u difaacan.
Xaafaddaha Bariga iyo waqooyiga ee magaaladda Addis Ababa oo ay degenyahiin dadka Tigreega ayaa ciidamadu go’doomiyeen, waxaana la xir xiray dhalinyaro iyo rag tiro badan oo qoomiyadda Tigreega ka soo jeeda oo guryahooda lagala baxaayay.
Ugu danbayna Ra’isal wasaaraha Abiy Axmed ayaa baaq u diray ciidamaddii hore ee ciidanka ka tagay inay dib ugu soo noqdaan si ayuu yidhi ay difaaca dalka uga qayb gallaan.
Maxamed Xuseen Shire – MOL Addis Ababa